Toeram-piofanana football anjotra manampy ny ankizy Indoneziana hanatsara ny fahaizany mandritra ny valan’aretina · Global Voices teny Malagasy
Hakingana Football aseho horonantsary amin'ny toeram-piofanana fanatanjahantena virtoaly
Voadika ny 18 Janoary 2021 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, عربي, Español, Français, Nederlands, Català, English
Santionan'ny video nasesiky ny mpandray anjara ao amin'ny toeram-panabeazana football anjotra. Loharano: Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube avy amin'i papa na akha.
Manodidina ny 1900 ireo ankizy Indonezianina nandray anjara tamin'ny toeram-pianarana football nanomboka tamin'ny Oktobra ka hatramin'ny Desambra 2020 nokarakarain'ny Biscuit Mondelez Indonesia.
Lasa toeram-panazarantena virtoaly ny Akademian-Tompondaka Biskuat, fifaninanana football fanao isa-taona ho an'ny ankizy ao amin'ny tanandehibe indoneziana miisa valo, tamin'ny taona 2020 rehefa sarotra ny manomana lalao ifanandrinana noho ny valan'aretina.
Nohazavain'ny mpikarakara ny antony nahatonga azy ireo hanatontosa ny “Sekolin'ny Football Anjotra” na dia maro aza ny fanamby napetraky ny valan'aretina:
Nampian-dry zareo fa tamin'ny alalan'ny toeram-panazarana, dia manana hirika ny ankizy hanazatra tena tahaka ny mpilalao football matihanina satria ny fandaharam-potoana dia notefena araka ny fenitra napetraky ny UEFA.
Anisan'ny fanatanjahantena malaza any Indonezia ny Football.
Tetikandrom-pianarana football folo no voaomana ho an'ny ankizy liana. Asaina avy eo ireo ankizy ireo hamoaka ny lahatsarin'ny fahaizana na teknikam-baolina norantovina nandritra ny fianarana.
Mandray fanazaran-tena avy amin'ny mpialalao matihanina sy fitarihana avy amin'ireo ekipa sangany amin'ny football avy ao Indonezia ny mpandray anjara. Hahazo fehezana vatsim-pianarana football ireo video 20 tsara indrindra nasesika hifaninana sy mari-pahavitana izany avy amin'ny Ministera Indonezian Misahana ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.
Notontosaina tamin'ny 16 oktobra 2020 ny andiany voalohany tamin'ny lanonana. Nambara tamin'ny 12 desambra 2020 ny 50 voalohany (top 50) raha nofantenina nandritra ny famaranana lehibe farany tamin'ny 19 desambra 2020 ny 20 voalohany (top 20) miatrika ny famaranana.
Fantaro i Ghazy “Salossa”
Iray tamin'ny mpandray anjara i Ghazy Adindra Kaysan, izay nahazo ny laharana faharoa nandritra ny Fifaninanana ho tompondaka anjotran'ny Akademia Biskuat 2020.
A post shared by Ghazy Khalif Nesia (@ghazy_khalif_nesia)
Video iray maharitra 60 segondra no mampiseho azy mitafy akanjo filalaovana mivoara-mainty eny amin'ny valahana, laharana 10 eo amin'ny tratran'ny akanjony, kiraro mavo, ary bankiraro mainty. Nitehaka tamin'ny fahakingana sy fahamailamailak'i Ghazy ny mpanentana ny lanonam-pamaranana lehibe ary nanome azy ny anaram-bositra Ghazy ‘Salossa’, izay manondro an'i Boas Salossa olomangan'ny PSSI (Football Association of Indonesia).
Vakivava tamin'ny zavabitan'ny zananilahy nandritra ny fifaninanana football virtoaly i Afandi Mansyur, rain'i Ghazy:
Tsy nampoizina ny nahazoan'i Ghazy Adindra Kaysan ny laharana faharoa tamin'ny Biskuat Online Championship 2020 Grand Final izay nahazoany ny isa 90. Latsaka 0.5 monja amin'ny isa azon'ny laharana voalohany izay zokiny telo taona izany isa azony izany ary voarakitra ho mpilalao tsara indrindra ao Yogyakarta
Eo am-piandrasana ny fiverenany hifaninana amin'ny fifaninanana lehibe amin'ny football, dia mbola mandany ny fotoanany amin'ny famakiana boky eny an-kianja ao anaty folakandro mahamay i Ghazy. Tsy mitsahatra mihitsy izy hanatanteraka ny nofinofiny sady mitozo mianatra mafy.
Manamafy ny lanjan'ny fampîvelarana ny fahaiza-manaon'ny tsirairay na dia ao anatin'ny fisian'ny valan'aretina aza izao tantarany manome aingam-panahy sy ny fahombiazany izao.
Ghazy mamaky boky eo ankilan'ny kianja filalaovam-baolina. Saripikan'i Afandi Mansyur, nahazoana alalana